မည်သည့်မော်ဒယ်ပဲဖြစ်ပါစေသင်၏ Kindle မှအကောင်းဆုံးကိုရယူရန်လှည့်ကွက် ၅ ခု eReaders အားလုံး
အ အမေဇုံ Kindle ၎င်းတို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့်စျေးကွက်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံး eReaders ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် Jeff Bezos ရဲ့ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီမှာစျေးကွက်အမျိုးမျိုးမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုရွေးချယ်နိူင်သည်။
နီးပါးမျှပိုင်ရှင်သည် Kindle, ဒီဟာဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အခါမှာဒီလျှို့ဝှက်ချက်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာလျှို့ဝှက်ချက်တချို့ရှိတယ်၊ ဥပမာ - စကရင်ရိုက်ကူးတာ၊ ငါတို့စက်ပစ္စည်းကို ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပို့တာစတာတွေပါ။ ဒီနေ့မင်းတို့ကိုငါတို့ပြောမယ် မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုမဆိုသင်၏ Kindle မှအကောင်းဆုံးရယူရန်လှည့်ကွက် ၅ ခု.
1 အီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏ Kindle သို့ eBook တစ်ခုပို့ပါ
2 သင်၏ Kindle သို့ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပို့ပါ
5 သင်၏ Kindle ပေါ်တွင်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပါ
အီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏ Kindle သို့ eBook တစ်ခုပို့ပါ
Kindle ထုတ်ကုန်များသည်အခြားစျေးကွက်ရှိ eReader များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းတို့သည် epub ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်အမျိုးအစားကိုမထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကသိပ်အရေးမကြီးဘူး၊ caliber မည်သည့်စာအုပ်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆို Kindle မှထောက်ပံ့သောပုံစံအမျိုးမျိုးသို့ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည်။
ထို့အပြင် Amazon သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် မည်သည့်စာအုပ်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းအီးမေးလ်ကနေပေးပို့ပါ။ ၎င်းကိုလုပ်နိုင်ရန်၎င်းကိုပူးတွဲပြီး Kindle နှင့်ဆက်နွယ်သောအီးမေးလ်သို့ပို့ရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏ကိရိယာအသစ်ကိုပြုပြင်ပြီးသည့်နောက်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိရမည်။
သင်၏ Kindle သို့ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပို့ပါ
Kindle ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည် နောက်မှဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်၏စက်သို့သတင်းများသို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးပို့နိုင်သည်။ ငါအလုပ်မှာငါ့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအရာတစုံတခုကိုဖတ်လျှင်, ငါ extension ကိုကျေးဇူးတင်ငါ၏အ Kindle ထံသို့ပေးပို့သည် Kindle သို့ပို့ပါတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြောခဲ့ပြီးသော၊ ကျွန်ုပ်အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ် eReader တွင်ဖတ်ပြီးပြန်ဖတ်ရန်ရှိသည်။
၎င်းကိုသင်၏ဂူဂဲလ်ခရုမ်းဘရောင်ဇာတွင်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်သင်သည်ဤလင့်ခ်ကို download လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သောနေရာမှသာရယူရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Kindle ပေါ်ကဆောင်းပါးတွေကိုရဖို့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်တောင်မှကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုရှိရမယ်။
စက္ကူပုံစံဖြင့်စာအုပ်များပေးသောကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာချေးငှားခြင်း၊ စွန့်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသူကိုပင်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုကိုဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်တွေမှာမရရှိနိုင်ပါ အကယ်၍ သင် Kindle ကိုသုံးလျှင်သင်သည်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အားစာအုပ်တစ်ချေးငှားနိုင်သည်အချို့အခြေအနေများတွင်သင်သိပ်မကြိုက်ဖွယ်ရှိသော်လည်း
အဓိကအခြေအနေကတော့ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် Amazon ကရွေးချယ်ထားသည့်စာအုပ်အချို့ကိုသာငှားရမ်းနိုင်သည်။ချေးငွေအတွက်ရရှိနိုင်သည့်စာအုပ်များကို "ချေးငွေထောက်ပံ့မှုဖွင့်" အဖြစ်ဖော်ပြသင့်သည်) နှင့်နှစ်ပတ်၏ကန့်သတ်အချိန်သည်။ ဤရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းသင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်ထံသို့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအခမဲ့ငွေချေးနိုင်သည်။
ဤချေးငွေကိုရရှိရန်သင်၏စာမျက်နှာကိုစီမံရန်ကိုဝင်ရောက်ပါ အမေဇုံ Kindle ။ သင်စာအုပ်ထဲထည့်ပြီးပါကသင်စာအုပ်ငှားလိုသောသင့်သူငယ်ချင်းနှင့်မိသားစုဝင်၏အမည်ကိုပေးရပါမည်။
Kindle ကိရိယာများအပါအဝင် e-book အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်ကိုမည်မျှကြာအောင်ပြီးစီးရန်လိုအပ်သည်ကိုအချိန်တိုင်းသိပါအဆုံးကိုရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့သောစာမျက်နှာများအပြင်။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်၏အဆုံးသို့ရောက်ရန်အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သည်ကိုသိရန်နှင့်အခြားအရာများအကြားမည်သည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့အိပ်ပျော်နိုင်မည်ကိုတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျနော်တို့စာအုပ်၏အဆုံးကိုရောက်ရှိ။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီစနစ်ကအမြဲတမ်းအမှန်ကန်ဆုံးနည်းနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် Kindle ပေါ်မှာငါတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအမေဇုန်ဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်ဆိုင်မှတဆင့် ၀ ယ်မခံရဘူးဆိုရင်၊ ကံကောင်းတာကဒီကောင်တာကို reset လုပ်ဖို့မရှုပ်ထွေးပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ရှာဖွေရေးယန္တရားကိုဖွင့်ရုံပဲ၊ ကန ဦး semicolon နှင့်စာလုံးအကြီးများကိုလေးစားသော "; ReadingTimeReset" ကိုရိုက်ပါ။ မည်သည့်ရလဒ်မှပေါ်ထွက်လာသည်ကိုသင်မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ ဤသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်ဖတ်နေသောစာအုပ်ကိုသင်ပြန်လည်ဖတ်ရှုသောအခါစာအုပ်၏အဆုံးသို့ရောက်ရန်ခန့်မှန်းအချိန်သည်မည်သို့မှန်ကန်စွာပြသနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ Kindle ပေါ်တွင်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပါ
သင်များစွာအတွက်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှည့်ကွက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ၏မျက်နှာပြင်ကိုယူရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နေသည့်စာအုပ်၏စာမျက်နှာကိုပုံနှိပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သော Kindle ၏မူကွဲပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာပြင်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် Amazon eReader မူကွဲအမျိုးမျိုးတွင်မည်သို့ရိုက်ကူးရမည်နည်း;
မူရင်း Kindle၊ Kindle 2၊ Kindle DX နှင့် Kindle တို့ပါရှိပါသည်: ဖန်သားပြင်ရိုက်ယူရန် Alt-Shift-G ကီးဘုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ထားရမည်
Kindle ၄: home ခလုတ်နှင့်ကီးဘုတ်ခလုတ်ကိုဖိ။ ကိုင်ထားပါ
Kindle တို့ထိပါပထမဆုံးအနေနဲ့ start ခလုတ်ကိုဖိထားပြီးမျက်နှာပြင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရယူဖို့ကိုနှိပ်ပါ
Kindle Paperwhite, Kindle (၂၀၁၄)ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် Amazon ကစခရင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုစဉ်းစားရတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေသည့်အရာ၏ပုံရိပ်ကိုလိုချင်ပါက၎င်းသည်မျက်နှာပြင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိအားပေးနိုင်သည်
Kindle ရေကြောင်းဖြေ - မျက်နှာပြင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းထိလိုက်ခြင်းအားဖြင့် Paperwhite လိုစခရင်ကိုယူနိုင်ပါတယ်
အိုအေစစ် Kindle: မျက်နှာပြင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်နှစ်ခုအားတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့် Voyage ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည်
ဒီလှည့်ကွက်တွေကသင့်ရဲ့ Kindle ထုတ်ကုန်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့သလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုမဆိုသင်၏ Kindle မှအကောင်းဆုံးရယူရန်လှည့်ကွက် ၅ ခု